Manampy anao ny Androidsis hampiato ny antso amin'ny feo WhatsApp | Androidsis
Androany, ary noho ny vondrom-piarahamonina Android izay tsara indrindra eto an-tany, dia nahatanteraka izany aho mampihetsika antso an-tariby WhatsApp. Amin'ny lafiny manokana dia mila misaotra ilay namana aho Nestor Gonzalez Niantso ahy tamim-katsaram-panahy izy ary nanao izay hahafahako mampandeha ny antso amin'ny feo WhatsApp mba hahafahako manasa anareo rehetra.
Ka raha te hampavitrika ireo fiasa vaovao fiantsoana feo WhatsApp ianao, maimaimpoana tanteraka amin'ny alàlan'ny fifandraisana data na Wifi, kitiho "Tohizo ny famakiana" satria hanazava ny pitsopitsony rehetra hotanterahina aho, ka ny tenako amin'ny alàlan'ny antso am-peo amin'ny alàlan'ny WhatsApp, manasa izay rehetra mangataka izany amin'ny alàlan'ny fanehoan-kevitra amin'ity lahatsoratra ity.
1 Fepetra takiana hihaonana hampiasana ny feo amin'ny WhatsApp
1.1 Nohavaozina 6/3/2015 tamin'ny 23:29 PM:
2 Nohavaozina 9/3/2015:
Fepetra takiana hihaonana hampiasana ny feo amin'ny WhatsApp
Ny voalohany indrindra dia misintona ny kinova farany misy an'ny WhatsApp avy amin'ny tranonkalanao manokana ctiana eto. Io ilay kinova 2.11.552.
Alohan'ny handefasana ny kinova vaovao alaina dia ilaina ny mankany Fikirana / fampiharana, kitiho eo WhatsApp y esory ny cache ary esory ny kinova taloha.
Avy eo ianao mankany Fikirana / filaminana ary alefaso ny permis apetraka fampiharana avy amin'ny loharano tsy fantatra manamarina ny boaty mifanaraka amin'izany.
Izao no fotoana hanaovana apetraho ny apk WhatsApp vaovao alaina amin'ny dingana teo aloha.
Rehefa sokafanao dia ho hitanao fa mitovy daholo ny zava-drehetra, ankehitriny dia hanana izany ianao miandry anao hiantso anao izahay mba hihetsika mandeha ho azy ny antsonao amin'ny feo WhatsApp. Zava-dehibe ny hamalianao ny fiantsoana hataonay anao !!Avelao aminay ao anaty bilaogy ireo nomeraon-telefaoninao noho izany, arak'izay tratry ny heriko Hasaiko tsirairay ireo rehetra mandao ny isany sy ny mponina ao Espana, izany hoe, miaraka amin'ny awana +34.
Araka ny nolazaiko anao, araka izay fara heriko dia hiantsoako ireo tsirairay izay mamela ny nomeraon-telefaon'izy ireo ao anaty ny hevitr'ity lahatsoratra ity. Manàna faharetana, hiantso anao daholo aho mba hahafahanao mankafy an'ity endri-javatra vaovao an'ny Antso am-peo WhatsApp.
Nohavaozina 6/3/2015 tamin'ny 23:29 PM:
Rehefa avy mihoatra ny adiny roa manao antso ankavia sy havanana, anjaranao izao ny miara-miasa sy mifampiantso manampy anao hampavitrika antso amin'ny feo WhatsApp. Araka izay azoko atao, afaka andro vitsivitsy dia hanohy hiantso ny rehetra aho.
Miarahaba ny namana rehetra !!
Noho ny fihoaram-pefy amin'ny fangatahana fampidirana ny Antso am-peo WhatsAppp, WhatsApp, aorian'ny 24 ora dia nakatony ireo mpizara natokana ho amin'ny fampandehanana ireo antso am-peo antenaina sy tadiavina. Raha vantany vao misy indray izy ireo dia hihazakazaka hampahafantatra anao indray izahay.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fampiharana Android » WhatsApp » Nohavaozina 9/3/2015: Androidsis manampy anao hampihetsika ny antso amin'ny feo WhatsApp: Eto no hanazavana ny fomba
Ento ny fahana RSS-nao amin'ny efijery hidin-tranonkalanao miaraka amin'i Corgi for Feedly